Miantso anao ny Tompo Matio 11: 28-30
Matio 11: 28-30 "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa Izaho hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako."
Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana amam-piadanany anie hoaminareo mandrakariva.
Efa teny mety mahazatra antsika angamba izoa tenin'Andriamanitra izao, efa fandre matetika. Nefa aza manao toy ny sahona hoe: "Efa reko, efa reko", fa matoa izao tenin'Andriamanitra izao no tonga amiko sy aminao; dia manana hambara amintsika indray Izy. Koa aoka àry isika ho tonga amin'ny fanavaozana ny fo sy saina ary Fanahy. Miantso ahy miantso anao ny Tompo eto hoe: "Mankanesa aty amiko". Inona no antony niantsoan'ny Tompo anao? Ento aty amiko hoy Izy izay "mavesatra" eo aminareo. Inona àry no zavatra mavesatra eo aminao?
Ny adim-piainana ve?, Ny vady nandao?, Ny zanaka maditra?, Ny vidim-piainana?, Ny olana eo amin'ny fiaraha-monina?, sns...
Raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia ho maivana izany rehetra izany. Eto ny Tompo ry havana dia miantso J esosy hoe: omeo ahy ireny rehetra ireny; satria Izy dia efa nitondra ny helotsika teo ambony hazo fijaliana, indro Izy efa tonga ota mba hamonjena antsika. Aoka tsy handalo fotsiny eo amin'ny fiainanao ny fankalazana ny Krismasy na ny andronan'ny Noely, izay nankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Aoka ho teraka ao am-ponao ny Tompo, tamin'izany fotoana izany dia tany antranon'omby ny Tompo no teraka fa akehitriny kosa, aiza no tianao ahaterahan'ilay mpamonjy? Aiza no toerana asianao azy?
Izy no ilay Mesia, be voninahitra, andrian'ny fiadanana, araka izay hita ao amin'ny Isaia 9:5 Izany ilay Jesosy Tompoiko sy Tompoinao. Ilay miantso anao hitondrany izay rehetra mavesatra eo aminao. Koa ankehitriny ary ry havana malala ao amin'ny Tompo, meteza hihaino ny Tomponao dia Jesosy Kristy, meteza atolory azy ny izay rehetra mavesatra ao aminao. Ary Izy koa dia milaza fa raha mianatra aminy isika dia hanana fiadanana, hanana fitsaharana. Afaka ny tebitebinao araka ny voalaza eo amin'ny andininy faha-29 izany. Inona tokoa moa no mahatonga ny olona ho sahiran-kevitra ny amin'ny fiainany? Isika olombelona dia novolavolain'Andriamanitra tamin'ny tany, vovoka isika rehetra izao, ka raha ny amin'ny maha vovoka antsika no jerentsika mandrakariva; izany hoe: ny rehaky ny tany sy izao tontolo izao izay mandalo sy miserana ihany, fa isika rehetra izao koa dia hody vovoka. Ary ity tany ity dia lohasahan-dranomaso. Ka ho very isika araka ny voalaza ao amin'ny Matio 16:26 Koa miantso ahy ny Tompo miantso anao koa, manatona azy, omeo azy ny manavesatra ny fonao sy ny fanahinao. Meteza hihaino ny Tompo, ary raiso Izy handidy sy hanapaka ny fiainanao; dia hanana fitsaharana ianao. Ry havana meteza ho teraka ao am-ponao ny Tompo anio, meteza handray azy ianao dia hanana ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy izay nomeny dia andrian'ny fiadanana.
Eto ny Tompo dia miantso antika ihany koa hoe: "Ento ny ziogako,... fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako". Eto dia misy fampitahana izay tian'ny tompo hisarihana sy hitaritana ny saintsika, misy karazana zioga firy moa eto ambonin'ny tany? dia nohazavain'i Jesosy tamiko io teny io ka dia hambarako aminao. Misy karazana zioga roa no hita eto ambonin'ny tany, mety hanotany ianao hoe: "inona avy izany?". Misy karazany roa hoy ny Tompo, dia ny zioga izay entiny olombelona ny iray ary entin'ny biby ny iray. Dia inona avy ary izany? Ny fanazavana dia toa izao: ny zioga entin'ny biby dia ampitahaina amin'ny zioga ampitondrain'ny satana ny zanak'olombelona izay mampiasa ny habibiany rehefa tonga any amin'ny helo ny olona iray. Inona moa ny biby mitondra zioga? Ny omby ry havana no mitondra zioga, misy sary entina amintsika amin'izany, raha hampizogaina moa ny omby dia inona izay no miandry azy? Enta-mavesatra, tsy zakan'olombelona dia izy ireo no asaina mitondra izany, eo am-pajogana ny omby aza, misy ireo mamaly tsy mety manao izany dia enjehin'ny tompony amin'ny karavasy; kapohina ampijaliana, aindraindray aza mody tambatambazina main'ny mangahazo na volona kely. Nefa inona no tambin'izay avy eo? Fijaliana. Dia toa izany koa no zavatra miandry ny olombelona izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa manaiky ny raviravizan'ny satana ireo zavatry ny tany, omeny ireo zavatra mahafinaritra rehetra hilibana eto amin'ity tany ity. Nefa rehefa tonga ny fotoana hialanao ety dia hamantana any amin'ny fahaverezana, hilanja ilay ziogan'ny satana mandrakizay, ka tsy ho afaka amin'izany intsony, na inona na inona hatao, fa dieny mbola misy ny fotoana mbola ahafahanao mibebaka, mbola afaka mitodika amin'Andriamanitra dia araraoty izany. Fa ny Tompo dia tsy tia ny hahaverezan'ny olona any amin'ny fahaverezana fa dia samy hahazao ny fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainy dia ilay tany kanàna, ilay tany tondra-dronono sy tantely. Koa meteza àry ianao hilanja ilay zioga faharoa dia izay entintsika olombelona, inona ary izany hoy ianao? Todio ny Ray amandreny mpitandrina, inona moa no filaza ny samboady ireny? moa tsy zioga va? Io ilay zioga tian'i Jesosy Tompo hambara aminao, manahoana moa ny lanjany moa tsy maivana va? ary inona kosa no entana entiny rehefa mandeha mitory ny filzantsara? Tsy inona izany ry havana fa ny Baiboly. Koa ankhitriny anjaranao no misafidy na hilanja ny zioga izay omen'ny satana dia ny toan'ny an'ny omby izay mavesatra ary mbola miharo kapoka, fijaliana tsy afaka manana fahalalahana tahaka ny an'ny Tompo. Ny an'ny Tompo dia manana fifaliana mandrakariva ianao rehefa mahavita asan'Andriamanitra mandritry ny tontolo andro. Satria nizara ny tenin'Andriamanitra, ilay teny fiainana, mahatonga fiadanana, mba hanana fiononana feno miaraka amin'Izy Tompo, ka hiara-hiriaria aminy eto amin'izao fiainana izoa ary mbola hiaraka aminy koa any amin'ilay fiainana mandrakizay, eo ankavan'ilay Ray tsy toha.
Ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany, ny fiadanany sy ny fahasoavany kosa dia hoamintsika tsirairay avy.
1. Dimby | 11/09/2014
Salama tompoko, izay aho vao nahita ity site ity, tena tsara sady mahafinaritra ny fisian'izao site izao, mampianatra ny tenin'AAA, izao dia FPVM iany koa, ka tena faly aho nahita itony site itony mba itoriana ny filazantsara an'i Jesosy, indrindra fa avy amin'ny finoako. Mankasitraka dia mahereza amin'ny asan'ny Tompo. Hiditra matetika ato za fa efa itako amin'izay ito site ito, :)